Gabaasa Hiiyumaan Raayitsi Waach kan bara 2016 Itoophiyyaa Ilaalchisee Afaan Oromootiin Baase – YEROOBLOG
Gabaasa Hiiyumaan Raayitsi Waach kan bara 2016 Itoophiyyaa Ilaalchisee Afaan Oromootiin Baase
Yerooblog	Horn of Africa, News & Views, Oromo Protests	 February 4, 2016 1 Minute
Hiiyumaan Raayitsi waach akkaata mirgi dhala namaa biyyoota adda adda keessatti itti qabamaa jiru ilaalchise gabaasa baasee jira. Gaabaaasni Itoophiyaarrattii bahe afaan sadiitiin dhiyaate: Afaan Oromoo, Ingiliffa fi Amaariffa. Dhaabbana idila addunyaa tokko Afaan Oromootiin gaabaasa yeroo dhiyeessu kan Hiiyuuman Raayitsi Waach kun kan jalqabaati. Kun immoo guddina Afaan Oromoof gahe guddaa’aa ni qabaata. Walumaa galatti gabaasni Hiiyumaan Raayitsi Waach baase kan armaan gadiiti.
“Motumaan Itoopian humna dhiibaa fudhechuu itti fuufeera. Bara 2015 keessatti qofa miseensota dhaabbilee siyaasaa, gaazexessitoota, fi hiriirtota nagaa baay’inni isaanii gidiraa adda addaa, hidhaa akka malee, akkasumas hiraarfama ilaalcha siyaasa irraa ka’ee gaggeeffamaa tureef saaxilamuun isaanii itti fufeera.
Sababa qaamota sagalee addaa qaban irratti karaan cufameef Gamtaan dhaabota siyaasaa aangoo irra jiru, Addi Dimokraatawaa Warraaqsa Ummata Itoopiyaa (ADWUI), baatii Caamsaa keessa filannoo gaggeeffameen teessuma paarlaamaa 547 hunda moo’eera. Dhufaatii Prezedantiin biyya Amerikaa Baaraak Obaamaa dura hidhamtoota siyaasaa beekamoo muraasa gadhiisuu tiin alatti mirga bu’uraa dhala namaa, seerota, imaammata caasaawwan bilisaa ummataa fi midiyaa cunqursan fi akka hin malletti sochii dhorkuuf tolfaman ilaalchisee biyatii keesatti fooya’insi ta’e homa hinjiru.”
Gabaasa guutuu isaa liinkii kana cuqaasuun dubbisaa. Gabaasa Hiiyumaan Raayitsii Waach ka bara 2016 Itoophiyaarratti Baase
Previous Post Ethiopia listed among the most corrupt Countries in the world according to Transparency International 2016 Report
Next Post Abune Pheexiroos (Magarsa Badhaasa) Eenyu Ture? Dhuguma innii Oromoo dha?
One thought on “Gabaasa Hiiyumaan Raayitsi Waach kan bara 2016 Itoophiyyaa Ilaalchisee Afaan Oromootiin Baase”